'भ्याक्सिन' लगाउने कि नलगाउने ? टिम 'ए' को कुरा सुन्ने कि टिम 'बि' को ? - लोकसंवाद
अहिले संसार दुई फ्याकमा बाँडिएको छ । भ्याक्सिन समर्थक अनि भ्याक्सिन विरोधी । मानौँ यो फुटबलको दुई वटा टिम हो रे ! कुन टिममा को को पर्छ मुनिको चार्टमा हेर्नुस् ।
टिम एमा विश्वका उच्च धनाढ्य तथा शक्तिशाली व्यक्तित्वहरू पर्छन् जसको मातहतमा ९५ प्रतिशत मिडियाहरू छन् । टिम एका डाक्टर र वैज्ञानिकहरू व्यक्तिगत स्वार्थको वा अन्य कुनै कारण (लोभ, लालच, डर, धाक धम्की आदिले) बिकेका अथवा समर्थक भएका हुन्छन् ।
बुझेर नबुझेर कतिपयले हामीलाई गाली गलौच गरिरहेका छन् । तर, पनि नेपालमा हामी ८, १० जना, मानिस बचाउने यस अभियानमा लागिपरेका छौँ । किनकि हामी चाहँदैनौ कि चुप लागेर बसेर हाम्रा इस्ट मित्र, साथीभाइ, नाता गोता सबै मरुन् । ती सबै मरे भने हामी मात्रै बाँच्नुको के औचित्य हुन्छ ?
यस टिमको उद्देश्य जसरी हुन्छ भ्याकसिनको माध्यम बाट विश्वको जनसङ्ख्या घटाउनु हो । बाँकीलाई ५जी आदिको सहयोगले नियन्त्रण गरेर जोम्बि बनाउनु हो । यो कुरा पूर्णरुपले बुझ्न एजेन्डा २१, इभेन्ट २०१, द ग्रेट रिसेट, जर्जिया गाईडस्टोन आदि बारे बुझ्न जरुरी हुन्छ । कन्स्पिरेसी थेउरी भनेर रट् लगाउनेहरूले अलिक गहिरो अध्ययन गरुन् नत्र त्यही कन्स्पिरेसीमा परेर ज्यान गुमाउनु पर्ला !
टिम बिमा उच्च स्तरका विश्व प्रसिद्ध डाक्टर, कानूनविद् , स्वतन्त्र पत्रकार तथा मिडिया पर्सन, अनुसन्धानकर्ता, वैज्ञानिकहरू पर्छन् । जसले विभिन्न कठिनाइ र अवरोधहरू बिच जनतालाई टिम एको जालझेल बारे सूचित गर्न लागि परेका छन् । तर टिम एले यिनीहरूलाई बदनाम गराउन यी मध्यका १२ जनालाई विशेष नामा करण पनि गरेका छन् : दि डिस्ईन्फर्मेशन डजन भनेर ।
यस बारे अधिकांश जनताहरू अनभिज्ञ छन् किनकि मिडियाले यिनीहरूको कुरा प्रकाशमा ल्याउँदैनन् । यिनीहरूको वेब पेज, फेसबुक, ट्विटर, युट्युबका भिडियोहरू सेन्सर, व्यान्ड गरिएका हुन्छन् । अनि कतिपयलाई डर, धाकधम्की आदिले तर्साउने गरिएको छ ।
तर, त्यसको बाबजुद उनीहरू यस कृत्रिम महामारी र भ्याक्सिनको भन्डाफोर गर्न लागि परिरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार यो भ्याक्सिन भ्याक्सिन नभएर मान्छे मार्ने बायो 'वेपन' हो । रोग भन्दा डरलाग्दो यसको सुई हो, रोगले भन्दा सुई हानेकाहरू करोडौँको सङ्ख्यामा आगामी हिउँद देखि मर्ने अनुमान गरिएको छ ।
यति ठुलो षडयन्त्र संसारमा आजसम्म कहिल्यै भएको थिएन । यसको तुलनामा दोस्रो विश्व युद्धमा लाखौँ मान्छे मार्ने योजनाकार हिट्लर पनि केही होइन । अतः उनीहरूको सुझाव यो छ कि सुई लगाउन तुरुन्तै बन्द गरियोस् अनि जनताले पनि यसको विरोध गरुन् । अनि पहिलो डोज लाइसकेकाहरूले दोस्रो लगाउने गल्ती नगरुन् ।
यसको रोकथाम र औषधि उपचार धेरै सजिलो र सफल छ । कोरोनाको सही उपचार नगरेर भयावह बनाइएको हो । यो त्यस्तो डराउनु पर्ने रोग नै होइन । तर, मिडिया र सरकारले मास्क, लकडाउन आदि गरेर डरलाग्दो बनाई रहेको छ । यसको मृत्युदर पनि एकदमै कम, औसत १००० मा दुई या तिन मात्र छ जुन वर्षे नि हुने रुघाखोकी भन्दा खासै बढी पनि छैन । तल सिडिसिकै तथ्याङ्क हेर्नुस् -
कोभिड बाट उमेर अनुसारको सर्भाईभल रेट :
० देखी १९ वर्ष सम्मकाहरु — ९९.९९७ प्रतिशत
२० देखी ४९ वर्ष सम्मकाहरु — ९९.९८ प्रतिशत
५० देखी ६९ वर्ष सम्मकाहरु —९९.९५ प्रतिशत
७० वर्ष माथिकाहरु — ९४.६ प्रतिशत
अतः रोग निवारण गर्न भ्याक्सिनको उत्पादन गरिएको होइन, सुई हानेर जनसङ्ख्या घटाउने उद्देश्यले बिल गेट्स, फाउची, डब्लुएचओहरुले जानाजानी रोग उत्पादन गरेर फैलाएको हो ।
यस कुराप्रति सचेत भएर अहिले धेरे ठाउँहरूमा मानिसहरूले विरोधको आवाज मुखरित गर्न थालेका छन् । तर, अमेरिकामा सरकारले भ्याक्सिन लिनका लागि अनैतिक तवरले विभिन्न प्रलोभनहरु दिइरहेको छ । जस्तै सुई हान्नेहरूलाई बियर, डोनट, लटरीको टिकट आदि फ्रिमा वितरण गरिरहेको पाइन्छ । अर्थात्, मानिसहरू एउटा डोनट वा बियरसँग आफ्नो जीवन साटिरहेका छन् ।
क्यानडामा त यति सम्म गरिरहेको छ कि स्कुल गएका बच्चाहरूलाई आमा बाबुको स्वीकृति विना आइसक्रिमको प्रलोभनमा फसाएर पनि सुई हानिरहेको अवस्था छ ।
यस्तो जघन्य अपराधको विरोधमा जर्मनीका ईन्टरन्याशनल लयर (वकिल) राईनर फुल भिक र विभिन्न देशका १०० जना भन्दा बढी डाक्टर, वकिलहरूको समूहले डब्लुएचओ, बिल गेट्स फाउचीहरु विरुद्ध क्राईम्स अगेन्स्ट ह्युम्यानिटीको मुद्दा हल्दैछन् । न्युरेम्बर्ग २ को नामले जसमा तिनीहरूलाई मृत्यु दण्डको माग समेत गरिएको छ ।
यति सबै पढी सके पछि तपाई आफैँ विचार गर्नुस् टिम ए को कुरा सन्ने कि टिम बि को ? अनि सुई हान्ने कि नहान्ने, विरोध गर्ने कि नगर्ने ? हामीले सूचित गरिदियौँ । अब रोजाई तपाईँको हो ।
विदेशमा भ्याक्सिन विरुद्धको जुलुस -
चित्त बुझेमा यो महत्त्वपूर्ण सूचना सबैले शेयर गरेर आफू पनि बच्नुस् अरूलाई पनि बचाउनुस् ।
डब्लुएचओ माथि मुद्दा हालिँदै...
भ्याक्सिन नलगाउने १८ कारणहरु...